Ifanadiana : Nodoran’ny dahalo miisa 100 ny tanàna -
AccueilSongandinaIfanadiana : Nodoran’ny dahalo miisa 100 ny tanàna
Ifanadiana : Nodoran’ny dahalo miisa 100 ny tanàna
Nampitondra faisana ireo mponina tao Ambohimiera, distrikan’ Ifanadiana indray ny dahalo miisa zato mahery nirongo fitaovam-piadiana , izay nahitana vehivavy manodidina ny roapolo isa, ny alahady lasa teo, tokony ho tamin’ny 06 ora ka hatramin’ny 08 ora maraina . Tsy vitan’ny nandroba sy nangalatr’omby miisa sivy izy ireo, fa mbola nandoro trano ihany koa ka rava tanteraka sy tsy nisy noraisina intsony ireo tanàna.”Sady niditra ny tanàna ireo dahalo no nanapoapoaka basy ka nandositra ireo olona. Izay nitsoaka dia nodoran’izy ireo avy hatrany ny tranony”, hoy ny fanamarinam-baovao avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny mpitandro filaminana hatrany, dia fantatra fa trano miisa 226 no may kila forehitra, ka voakasika hatramin’ny trano vadim-piangonana tany an-toerana. Olona manodidina ny 1130 no simba fananana sy tsy manan-kialofana intsony vokatr’izany. Raha ny fantatra, dia tsy nisy kosa ny aina nafoy na ny naratra na dia tao anatin’ny tampoka aza no namelezan’ireo olon-dratsy ny mponina tao Ambohimiera. Efa tonga ao amin’ity distrika ity moa ireo manam-pahefana avy any Mananjary sy Ambohimasoa manatevin-daharana ireo mpitandro filaminana any an-toerana.
Efa noraisina ihany koa ny fepetra rehetra amin’ny alalan’ny fanaovana savahao ny tanàna sy ny fametrahana barazy any amin’ireo lalana mivoaka ao amin’ity distrika ity, ahafahana manenjika sy misambotra ireo dahalo. Tsy vao sambany ireo olon-dratsy no manao fomba tahaka izao, ary betsaka no efa lasibatra raha tsy hilaza afa-tsy ireo fianakaviana eni-mianaka niharan’izany tany Ambatovaventy, distrikan’Antanifotsy tamin’ny volana septambra tamin’ny taon-dasa. Nodoran’ny dahalo tao amin’ny trano fonenany ihany koa no nahafaty ireo valo mianaka tany Ambohimasoa ny volana jolay 2017. Manoloana ny zava-nisy, dia miferotr’aina tanteraka ireo mponina mipetraka any amin’ireo faritra sy distrika hanjakan’ny tsy fandriam-pahalemana. Sarotra ho an’ireo mpitandro filaminana izay manao ny ainy tsy ho zavatra ihany koa ny fanarahan-dia ireo dahalo izay maro an’isa lavitra sy hary fitaovana noho izy ireo. Ankoatra ny tsy fahampian-tsakafo, dia isan’ny olana sedraina any Ifanadiana ihany koa ny tsy fahampian’ ireo mpitandro filaminana mandray an-tanana ny fikarohana sy ny fanadihadiana. Na eo aza anefa izany, dia tsy maintsy mandray ny andraikiny ireto farany ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany.